Wax Ka Ogow Kulamada Darbiga Ah Ee Sabtida Iyo Axadda Ka Dhici Doona Wadamada Yurub | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Wax Ka Ogow Kulamada Darbiga Ah Ee Sabtida Iyo Axadda Ka Dhici Doona Wadamada Yurub
Iyadoo dhamaan ciyaartoyda kooxaha qaaradda yurub ay kasoo laabteen waajibadkooda qaran ayey hadana kooxaha qaar ciyaarayaan kulamo aada u adag todobaadkaan, kaliya maahan in kulamada Madrid Derby iyo Derby della Madonnina ay yahiin kuwa adag ee laga ciyaarayo yurub balse waxaa jira ugu yaraan afar kulan oo ay tahay in isha lagu hayo kuwaas oo ay ciyaarayaan kooxo aad u xifaaltama.
Kulamada la ciyaarayo todobaadkaan sadex ka mid ah waxey dhici doonaan 19-ka November oo ku beegan berito [Sabti] halka kulanka Derby della Madonnina la ciyaari doono Axadda oo ku beegan 20-ka November.
Mid ka mid ah kulamada dhimashada ah ee aadka loo wada sugayo wuxuu garoonka Vincent Calderon ku dhexmari doonaa Estadio Vicente Calderon waxaana wada ciyaari doona Atletico Madrid iyo Real Madrid.
Kooxda hogaamineysa La Liga ee Real Madrid ayaa lix dhibcood hoos u fiirineysa Atletico Madrid ka hor inta aysan ku booqan Calderon, Atletico ayaana fursad siin karta Barcelona oo kaliya laba dhibcood ka hooseysa Los Blancos, balse Bulgarana waa iney dubato Malaga hadii ay fursadaas hesho.
Kulanka labadaan kooxood waa kulanka ugu weyn ee Milano, waana kulanka ugu qiimaha badan ee San Siro madama labadaan kooxood uu hal garoon ka dhaxeeyo, Axadda ayeyna fooda is dari doonaan.
Inkastoo kooxahaan aysan heer aheyn sidii ay ahaayeen 5 ilaa 8 sano ka hor hadana, marka laga hadlo saameynta uu ku leeyahay maamulka, ciyaartoyda iyo jamaahiirta waa mid aad u sareeya oo lagu tilmaami karo kan ugu weyn ee wadanka talyaaniga.
Inter Milan ayaa laba guuldaro ka heshay Milan kulamadii ugu dambeeyay, Vincenzo Montella ayaana si wacan ku wada kooxdiisa xagaagan, waana waa cusub oo u dilaacay Milanes-ka.
Inkastoo ay Milan fadhiso booska sadexaad iyadoo kaliya shan dhibcood ka hooseysa Juventus, waxey isha ku heysaa iney sare u kac sameyso madama ay hami sare ka leedahay horyaalka xagaagan ama ugu yaraan tartamada yurub.
Dhanka kale Inter Milan oo iska ceyrisay macalinkeedii hore Frank de Boer iyadoo ku badashay Stefano Pioli, Inter mugdi ayey ku bilaabatay xagaagan, balse wajiga kale ee kooxda waa laga war dhawri doonaa.
Kulamada 12-aad midka ugu horeeya wuxuu dhexmari doonaa Manchester United iyo Arsenal, Lix dhibcood ayaa u dhaxeysa labadaan kooxood, Gunners ayaa fadhisa booska 4-aad halka Red Devils ay fadhiso booska 6-aad.
Xiisaha ugu badan ee kulankaan wuxuu yahay iney iska hor imaanayaan Jose Mourinho iyo Arsene Wenger iyadoo macalinka reer Portugal uu rikoor fiican ka heysto Gunners iyo macalinka reer France.
Sabtida sidoo kale waxaa jira kulanka German Clasico ee dhexmara kooxaha Bayern Munich iyo Borrusia Dortmund kuwaas oo ah kooxaha ugu waaweyn dalkaasi.
Xagaagan waa mid waji cusub u ah dhamaan kooxaha Bundesliga madama Bayern ama Dortmund aysan midkood hogaanka kali ku aheyn, wiilasha Carlo Ancelotti waxaa hogaanka la wadaaga RB Leipzig.
Dortmund kaalinta 5-aad ayey fadhisaa iyadoo 6-dhibcood ka hooseysa kooxaha ugu sareeya horyaalka ee Leipzig iyo Bayern Munich.
Mats Hummels ayaa dib ugu laaban doona Signal Iduna Park, halka Mario Goetze uu wajahi doono kooxdisii hore Bayern Munich.